Nzira yekutsvaga bhaisikopo usingazive zita | Ndipei zororo
Pane dambudziko rekuti kunyangwe ivo vakanaka vevanoenda kumabhaisikopo vanowanzosangana naro muhupenyu ... Kwete kurangarira musoro weimwe firimu yekutarisa kana kukurudzira! Hazvigoneke kwatiri kuti tirangarire zita remufirimu wega wega watakaona. Nhau dzakanaka ndedzekuti tekinoroji inogona kubatsira kuzorodza ndangariro yedu uye uwane iyo bhaisikopo inotinakidza isu zvakanyanya nekuti isu tinongoda kuratidza makiyi ekutsvaga. Ichi chinyorwa chinoratidza iyo Nhatu-nhanho gwara rekutsvaga iyo bhaisikopo usingazive zita racho.
Fungidzira chiitiko ichi: unouya kumba kubva kubasa uye chaunoda chete kuzorora pamberi peTV uye kuona firimu. Iwe unotsvaga paNetflix uye pakati pesarudzo dzainopa haungawane chero chinhu chaunoda ... Pakarepo unorangarira iyo bhaisikopo yawakada iwe pawakazviona pa cinema uye wakasara uine chishuwo chekuchiona zvakare. Mutambi mukuru mutambi waunofarira uye akakuita kuseka zvinonzwika. Iyo inomiririra sarudzo yakasarudzika, iwe chete ndiwe unosangana nedambudziko: Chii chinonzi zita remufirimu?
Usanetseke! aya marudzi emamiriro ane mhinduro yakapusa uye inokurumidza. Iwe unongoda zvishoma zvekurangarira kwako uye uve neinternet.
Mufambiro une aya anotevera matanho:
Unganidza ruzivo rwakawanda sezvinobvira
Tarisa muinjini yekutsvaga yeGoogle
Shandisa ruzivo ruzivo
Pazasi ini ndinotsanangura imwe neimwe yazvo zvakadzama:
1 STEPI 1: Unganidza ruzivo rwakawanda sezvinobvira
2 STEPI 2: Tarisa muinjini yekutsvaga yeGoogle
3 CHITATU 3: Shandisa ruzivo ruzivo ruzivo
STEPI 1: Unganidza ruzivo rwakawanda sezvinobvira
Iyi diki ongororo ndiyo hwaro uye pane izvi iwe unoda rutsigiro rweyeuchidzo yako kuti uwane chinangwa, shandisa inotevera mienzaniso:
Ndiani kana ndiani nyeredzi muchirongwa
Muguta ripi iyo firimu inoitika
Chiitiko chakati chaunorangarira (Dinosaurs -Giant marobhoti ari kurwisa guta reHong Kong. Vaviri vakatasva mumotokari vanopfuura pamusoro pemunhu mumugwagwa, nezvimwewo)
Gore rinofungidzirwa iwe waona iyo bhaisikopo
Uine vanhu vapi vawaiperekedza panguva yekuzviona sezvo ivo vachiita sosi yakanangana neruzivo iyo inogona dzimwe nguva kukuchengetedza nguva uye simba mukutsvaga.
Mhando yemamuvhi: kutyisa, kudanana, kusagadzikana
Nyika yakabva iyo firimu
Kunyanya mitsara yeimwe nhaurirano mufirimu
Zvakasarudzika zvinhu muchiitiko (wachi, madhaimondi, shangu, rudzi rwewadhiropu, nezvimwewo)
Zviri nezve unganidza yakawanda data sezvinobvira kuve neruzivo rwakananga izvo zvinobatsira kwazvo kune anotevera matanho.
STEPI 2: Tarisa muinjini yekutsvaga yeGoogle
Zvinogoneka kuita mibvunzo yakapfava muinjini yekutsvaga kuti uwane zita racho yeiyo firimu firimu yatiri kutsvaga. Zviri nyore kwazvo, isu tinongoda kuzvimisikidza pedu nhanho 1 uye iyo mienzaniso inoratidzwa pazasi:
Chii chinonzi zita remuvhi iro Bruce Willis murapi wemukomana anoona zvipoko? (Wechitanhatu Sense)
Ndeipi firimu vaviri vachitsvodana pane pier panguva yedutu? (Dhayari yaNoa)
Chii chinonzi zita remufirimu apo munyori anonyengera achipomedzerwa kuuraya vamwe vake? (Basic Instinct)
Musoro wemafirimu anozivikanwa zvikuru a Audrey Hepburn
Zita remuvhi reSpanish uko murume anoendesa vana vake kuchikoro obva aona kuti mota yake ine bhomba (Izvo Hazvizivikanwe)
Ndeipi bhaisikopo rakabudirira kwazvo muherohero munguva pfupi yadarika?
Zita remufirimu rinotarisana naPenelope Cruz uye mumwe mutambi uyo mavanopinda pazororo kuenda kuBarcelona uye vachidanana nemurume mumwe chete (Vicky Christina Barcelona)
Muzviitiko zvakawanda, kutsvaga kwemufirimu wako kunogona kupera pano. Google inobatsira chaizvo uye ine mirairo yekutsvaga inodiwa kuti uwane zvese ruzivo rwuripo.
CHITATU 3: Shandisa ruzivo ruzivo ruzivo
Ukasvika pano, zvinoreva kuti firimu rauri kutsvaga rakanyanya. Nekudaro, pane zvishandiso zvepamhepo zvinokubatsira iwe kuti uwane iyo bhaisikopo iwe yaunoda. Ini ndinotsanangura pazasi masosi akakosha eruzivo ayo anonyanya kushandiswa:
Chii chinonzi bhaisikopo rangu? Iyo injini yekutsvaga yakagadzirwa muFinland ine chinangwa chekubatsira mushandisi kutsvaga mabhaisikopo achishandisa mazwi akakosha akaiswa muinjini yekutsvaga. Aya mazwi anoda kunyorwa muChirungu uye kutsanangura chikamu chechikamu. Ruzivo rwakadzama ruchaita kuti kutsvaga kuve nyore. Iyo ndeimwe yeanonyanya kutsvaga injini dzekutsvaga sezvo yakaitwa yekufunga nezve kuongorora mavhidhiyo akateedzana. Anogadzira chikuva ndiValossa uye anovavarira kuisa webhusaiti se "yekutanga injini yekutsvaga zvichibva munhoroondo inotsanangura". Imwe yehunhu hwayo hukuru ndeyekuti ine izwi rekuraira rinoratidza rakafanana neiro rinoshandiswa muShazam naSiri. Iyo saiti ine anopfuura makumi mashanu ezviuru mafirimu mune yayo portfolio.
Filmaffinity. Iyo peji rakagadzirwa muSpain nemushoropodzi Pablo Kurt Verdú. Inoshanda senge rudzi rwehukama pasocial network apo vashandisi vanogona kuita kurudziro yemamuvhi kuburikidza nekugadzira rondedzero. Inosanganisira dhatabhesi hombe ine mafaera efirimu yega yega inosanganisira zvirevo, pamwe neruzivo pane director, zuva rekuburitsa, matrailer, genre, manhamba, ratings, nezvimwe. Chishandiso chikuru chainopa iwo mukana wekutaura nevamwe vanhu uye uwane maonero avo.
IMDB (Internet Movie Dhatabhesi). Icho chimwe cheanonyanya kuzivikanwa masosi eruzivo mumunda padanho repasirese, rakagadzirwa muna1990. Ine matrailer, pamwe neruzivo rwese rwakanangana nefirimu. Kunyangwe iyo isingape yakatsanangurwa yekutsvaga senge sarudzo, iwe unogona kutsamira pakutsvaga kwemafirimu nemutambi uye iwe zvechokwadi uchawana rumwe rubatsiro.
Maforamu maforamu uye mablog. Ivo sosi yakanaka kwazvo yeruzivo sezvo paine huwandu hukuru hwevanhu vanotora chikamu mumaforamu uye vanowedzera mikana nekuda kwekuvhurika kwavanomiririra. Mamwe masosi anotevera: Cinemania, Maawa Akarasika, Yakazara Firimu, Blog de Cine uye Torrentfreak.
Kazhinji, kutsvaga kunofanirwa kukurumidza, zvisinei zvakakosha kuti urangarire zvimwe zvakawanda zvemufirimu iwe waunoda kudzikisa nguva dzekutsvaga. Ndinokukurudzira kuti utarise kuitira kuti kana ukakanganwa zita remufirimu unogona kugadzirisa dambudziko iri nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » Cine » Maitiro ekutsvaga iyo bhaisikopo usingazive zita racho